Beta-ka dadweynaha ee iOS 16 dib ayaa loo dhigi karaa dhibaatooyinka xasiloonida awgeed | IPhone News
Angel Gonzalez | 18/05/2022 12:00 | macruufka 16, Noticias
La WWDC Waxay ku dhowdahay geeska waxayna noqon doontaa furaha furaha marka Tim Cook iyo kooxdiisu ay soo bandhigi doonaan nidaamyada cusub ee hawlgalka. Waxaa ka mid ah iOS 16 iyo iPadOS 16, kuwaas oo sida muuqata aan la imaan doonin isbeddello naqshadeed oo waaweyn, laakiin leh astaamo cusub oo hagaajinaya isdhexgalka nidaamka ee isticmaalaha. Si kastaba ha ahaatee, wax ayaa ka dhacaya Cupertino. Wararkii ugu dambeeyay ayaa tilmaamaya Arrimaha xasiloonida ee iOS 16 betas Tani waxay keeni kartaa dib u dhac ku yimaada sii deynta beta-ga guud Taasi waxay noqon kartaa dhowr toddobaad oo soo daahay.
Dhibaatooyinka xasiloonida ayaa dib u dhigi doona soo saarista beta dadweynaha ee ugu horeeya ee iOS 16
Qalabka beta ee nidaamyada hawlgalka Apple waa ka badan yahay subagga. Muddo sanado ah, Apple u siidaaya betaskii ugu horeeyay ee horumariyeyasha dhamaadka hadalka furaha ee WWDC. Waqtigaas, isticmaaleyaasha ka mid ahaanshaha barnaamijka Horumarinta Apple ayaa ku rakibi kara beta-yadaas qalabkooda. Toddobaadyo ka dib, iyadoo la bilaabay beta labaad ee horumariyeyaasha, Apple wuxuu furay Barnaamijka Beta Dadweynaha, isagoo bilaabay nuqulkiisii ​​ugu horreeyay. Barnaamijkan waxa geli kara isticmaale kasta oo haysta qalab ku habboon.
Si kastaba ha ahaatee, IOS 16 waxay u muuqataa in taariikhuhu isbedelayaan. Wararkii ugu dambeeyay ee gurman farta ku fiiq maxaa iOS 16 ma aha mid deggan sida Apple uu rabo. Dhismihii ugu dambeeyay ee beta-ga ugu horreeya ee horumariyayaashu ma aha mid gebi ahaanba deggan taasina waxay la macno tahay taas betas dadweynaha ayaa dib u dhigi doona siideyntiisa. Tani waa sababta oo ah Apple ma rabto in ay wado khatarta ah in ay soo saarto noocyo waaweyn oo qaab betas dadweynaha sababtoo ah waxay la macno tahay kala firdhinta nidaamka hawlgalka ee tayada hoose ee la rabo.
IOS 16 beta-gii ugu horreeyay ee dadweynaha waxaa la qorsheeyey iOS 16 horumariye beta 3 bisha Luulyo. IOS-ka ugu horreeya beta-yada dadweynaha waxaa sida caadiga ah la siidaaya iyadoo la socota beta 2. Taas macnaheedu waa beta dadweynaha ayaa laga yaabaa inay gadaal ka socoto. Abuurka gudaha ee hadda jira waa xoogaa cidhiidhi ah. Arrimuhu wali waa dareere oo way beddeli karaan.
- Mark Gurman (@markgurman) Waxaa laga yaabaa 16, 2022
Taariikhaha tilmaamuhu waxay dhigayaan beta ugu horraysa ee horumariyeyaasha Juun 6, tan labaad laba toddobaad ka dib iyo tan saddexaad ee Luulyo. Waxay ku jirtaa beta-ga saddexaad ee horumariyeyaasha marka Apple uu go'aansan doono inuu bilaabo nuqulkiisii ​​ugu horreeyay ee Barnaamijka Beta Dadweynaha. Farqiga u dhexeeya ayaa ah in marar kale Apple ay u furto barnaamijkeeda beta ee dadweynaha beta labaad ee horumariyeyaasha.
Waan arki doonaa haddii kuwa ka socda Cupertino ay ugu dambeyntii u suurtagasho inay helaan nooc deggan si ay u soo ceshadaan jadwalka caadiga ah ama haddii, caksigeeda, aan hayno war ku saabsan iOS 16 betas.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » macruufka » macruufka 16 » IOS 16 betas dadweynaha waa la daahi karaa arrimo xasiloonida dartood